Kismaayo News » Turkiga, Cuf-isjiidad Danabeysan
Turkiga, Cuf-isjiidad Danabeysan
Kn: Ra’isulwasaare ku xigeenka dalka Turkiga Bekir Bostag oo hadlay waxa uu sheegey in gacantii ay dowladdiisa u fidisey Soomaaliya ay ahayd mid shacabka Soomaaliyeed ay aad oga galad sheeganayaan, Rabina oga mahadcelinayaan in Turkiga usoo direy markii ay u baahnaayeen.
Ra’isulwasaare ku xigeenka oo sidoo kale ka hadlay saameynta sii kordheysa ee Turkiga Afrika ku leeyahay ayaa sheegey in ay Afrika ku leeyihiin 34 safaaradood oo buuxa, iyagoo markii hore ku lahaa 10 safaaradood oo kaliya, kororkaasina uu dhacay 10 sanno gudahood.
Waxaa safaaradahaasi ka mid ah mid ay Turkiga Xamar ka furteen, iyada oo aduunka intiisa kale aysan sidaasi yeelin.
Xagga deeqaha waxbarasho Turkiga waxa ay noqotey meel sidii “cuf-isjiidadka” ama “Gravity” oo kale ah taasoo sidoo kale uu ku tilmaamay “bir danabaysan” ama “Magnate”, sida uu hadalka u dhigey mar uu waraysi siiyey wakaaladda Wararka dalkaasi Anotolia.
Tusaale ahaan sanadkii 2011 waxaa Turkiga deeq waxbarasho weeydiistey 9,000 (sagaal kun) oo arday, halka sanadkani dhamaaday ee 2012-ka ay arjiyadooda soo dirsadeen 45,000 (afartan iyo shan kun) oo arday.
Ardayda deeqda waxbarasho la siiyey waxaa ka mid ah kumanaan Soomaali ah oo hadda heerar kala duwan oo tacliin ah barta.
Soomaaliya waxa uu sheegey in kaliya ay bini’aadanimo u caawinayeen, aysan jirin wax dan ah oo ay la lahaayeen. Waxa uu yiri “Dadka Soomaaliyeed hadda waxa ay joojiyeen in ay sugaan Malakumoodka, taasina waxaa mahadeeda leh dhaqaatiirta Turkiga ee dadka rajadoodii soo celiyey“, Waxa uu intaasi ku daray in dadka ay aad ugu farxeen markii ay arkeen dayuuradaha Turkiga ee gargaarka wada.
Wakaaladda Horumarinta iyo Iskaashiga caalamiga ah ee Turkiga ee marka magaceeda lasoo gaabiyo uu yahay TIKA ayaa sanadkani adeegyadeeda iyo meelaha ay ka hawlgasho ku baahisey illaa 33 dal oo aduunka ka tirsan.